प्रधानमन्त्री ओलिको महान कदम एसिडले छोए १० वर्ष, अनुहारमा परे २० वर्ष कैद ! ज्यान गए जन्मकैद - Sansar Dainik
प्रधानमन्त्री ओलिको महान कदम एसिडले छोए १० वर्ष, अनुहारमा परे २० वर्ष कैद ! ज्यान गए जन्मकैद
September 25, 2020 adminLeaveaComment on प्रधानमन्त्री ओलिको महान कदम एसिडले छोए १० वर्ष, अनुहारमा परे २० वर्ष कैद ! ज्यान गए जन्मकैद
डा. गोविन्द केसीकी आमा भन्छिन ‘मैले मेरो छोरा देश र जन’ताका लागि सम’र्पण गरे’ !
पवित्रालाई हौसला दिन पुगिन् मुस्कान, भनिन्- रोएर हिम्मत नहार्नू, अपराधीहरूको हौसला बढ्छ !
निषेधाज्ञामा कसैको पनि चुलो ननिभोस् भन्ने उद्देश्यका साथ भैरवामा फुड बैंक शुरु..